tetsy amin’ny foibeny etsy Bel’air omaly. Taiza ao anaty kolontsaina malagasy, hoy izy ireo, no nisy Coliseum, raha naneho ny heviny mikasika ny fanorenana izany eo ambonin’ity lapa ity. Entina hidedahana sy hanaovana fety amin’ny 26 jona ve io? Miantso ny amin’ny tokony hampiaton’ny fanjakana ny fanovana ny satan’ny Rovan’i Manjakamiadana izay tanterahin’ny Fitondram-panjakana ankehitriny ny RMDM; raha misy ny asa fanatsarana hatao hoy hatrany pastera Eudouard dia mitovy amin’ny teo aloha ihany no tokony hatao fa tsy volena coliseum na zavatra hafa izany izay mety hampitontongana ny hasin’ny firenena sy ny tany.Tsy efa nahafahana namonjy ny malagasy manoloana izao voina mahazo azy izao ve ny vola lanilany foana nanaovana azy io, hoy hatrany ny RMDM? Tsy misy fierana na amin’ny vahoaka na amin’ireo taranak’Andriana. Fara-faharatsiny mba nierana tamin’ny mpanolontsainan’ny tanànan'Antananarivo, hoy izy ireo, dia ireto farany indray no mampita ny hafatra amin’ny vahoaka. Mangataka ny hampiatoana avy hatrany ity fanovana ny satan’ny Rovan’i Manjakamiadana ity araka izany ny RMDM satria mety hitarika ny fanafintohinana ho an’ny vahoaka Malagasy izany